“कुत्सित मनोभावना राख्ने केही ब्यक्तिहरुले संस्थालाई बिघटन तर्फ लैजाँदै छन्” :: NepalPlus
“कुत्सित मनोभावना राख्ने केही ब्यक्तिहरुले संस्थालाई बिघटन तर्फ लैजाँदै छन्”
नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७८ असोज २७ गते २३:२९
गैर आवाशिय नेपाली संघको विवाद उत्कर्षमा चलिरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयको पछील्लो पत्रले दुई वर्षमा हुने अधिवेशनलाई अन्योलमा पुर्याएको बेला अध्यक्षका एक जना प्रत्याशी कुल आचार्यले आफुहरु सबै विवादका विषयमा बसेर छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन ।
उनले भनेका छन- “विद्यमान विवादका विषयमा हामीहरु नेतृत्व सँगसँगै बसेर छलफल गर्न तयार छौं । तर नेतृत्वले आफ्ना गल्तीहरु स्विकार गरेर अरुको पनि अस्तित्व छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । सिस्टमलाई दुरुपयोग गरेर कब्जा गर्ने, जनभावना विपरित गएर प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने जुन कार्यहरु भएका छन नेतृत्वले त्यो सच्याउनु पर्‍यो ।”
उनले थपे “गैर आवाशिय नेपाली संघ आफैंमा पवित्र छ । यसलाई हामी बचाउन चाहन्छौं । साथीहरुले झुटको खेती बन्द गर्नु पर्‍यो । तर संस्था प्रती कुत्सित मनोभावना राख्ने केही ब्यक्तिहरुले यसलाई दुरुत्साहित बनाउन खोजिरहेका छन र तिनले नै संस्थालाई बिघटन तर्फ लैजाँदै छन् ।
आचार्यले नेपालप्लससँग कुरा गर्दै भने “समयमा अधिवेशन गराउन नसक्नु अहिलेको कार्यसमितिको गम्भिर असफलता हो । संस्थालाई यो अवस्थामा पुग्नुमा वर्तमान कार्यसमितिका केही पदाधिकारीको मुख्य भूमिका छ । हामी संस्थालाई जुनसुकै अवस्थामा बचाउन चाहन्छौं । विवादहरु समाधान गर्नुको साटो अधिवेशन सार्नु गम्भिर षड्यन्त्र हो । उनले अधिवेशन पर सार्ने निर्णय आफैंमा अवैधानिक भएको पनि बताए ।
आचार्यले भने- विधानत: आइएसले एजेण्डा तयार गर्न सक्छ । अधिवेशन सार्ने निर्णय गर्न सक्दैन । प्रवक्ता मार्फत अधिवेशन सर्‍यो भन्दै झुक्याएर गरेको निर्णय वैधानिक छैन । ईतिहासमा हामी सफल भयौं अथवा असफल भयौं भन्ने लेखाजोखा यो कार्य समितिले गरोस । हारे पनि जिते पनि यो पवित्र अभियानलाई अगाडि बढाउन हामी सधैंं तयार छौं । “तर अहिलेको नेतृत्वले संस्थालाई निमिट्यान्न गराउने कार्यको मैले सधैंभरी विरोध गरिरहन्छु ।”
‘परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई संस्थाको आन्तरिक मामिलामा आमन्त्रण गरेको कसले हो ?’ भन्ने एउटा प्रश्नमा आचार्यले भने- “हिजो केपी ओलीले फ्रान्समा हाम्रो उम्मेदवार फलानो हो भन्दा राजनीति भएन ? आफ्ना पक्षकालाई जिताउन सुभाष नेम्वाङ, वृन्दा पाण्डे र युवराज चौलागाइँको समिती बनाउँदा राजनीति भएन ? हिजो कृषी समितिलाई कुनै प्रदेशले १० करोड रुपैयाँ दिदै गर्दा यो त कांग्रेसले गरेको हो रकम दिनु हुँदैन भनेर फोन गर्दा राजनीति भएन ? यो सबै आफुले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न अरुलाई राजनीति गर्‍यो भनिएको हो । विदेसमा बस्ने ८० लाख नेपालीहरुलाई बेच्ने काम भएको छ । हामीले भनेको सबै नेपालीको भावनाको संस्था, मर्यादित संस्था हो । यसो भन्दा कसरी राजनीति हुन्छ ?
आफूहरुले यो संस्थालाई प्रतिष्ठित र गरिमामय बनाउन लडिरहेको आचार्यले बताए । ‘अधिवेशन गर्न नसक्ने, निर्वाचन गराउन नसक्ने अनी आएका समस्याहरुको समाधान गर्न नसक्ने नेतृत्वले हामी यो संस्थाको नेतृत्वकर्ता हौं भन्ने अधिकार कसरी रहन्छ ?’ आचार्यको कथन थियो ।
‘तपाइहरुको अथवा यि विवादको कुनै न कुनै मिलन विन्दु त होला नि ?’ भन्ने नेपालप्लसको अर्को एउटा प्रश्नमा आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै अगाडि बढेर विवाद सुझाउने तर्फ वर्तमान नेतृत्व जाने हो भने फेरी मिलेर जान सकिने बताए ।
‘तर परराष्ट्रको निर्देशनका विरुद्द संस्थापना पक्ष अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ नि’ भन्ने अर्को एक प्रश्नमा आचार्यले भने- “अदालत जाने कुरा स्वागतयोग्य छ । त्यो कुरालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु । तर अचम्म कस्तो छ भने गल्ती गर्ने अनी त्यसलाई ढाकछोप गर्न अदालत जाने ? अदालतले पक्कै पनि भन्ने छ यो कुरा ।”
एनआरएनको अधिवेशन प्रकृया शुरु भए देखी नै नेपाली कांग्रेसले कुल आचार्यलाई आफ्नो उम्मेद्वार बताउँदै आचार्यको पक्षमा लाग्न विदेशस्थित जनसंपर्क समितीहरुलाई निर्देशन् दिएको छ भने आफ्ना समर्थक र कार्यकर्ताहरु परिचालित गर्न एनआरएनएले छुट्याएका पाँचै क्षेत्रमा कांग्रेस नेताहरु तोकिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको असोज १५, २०७८ को मितिमा चलानी नंवर ०९९ /०७८ रहेको परिपत्र अनुसार युरोप क्षेत्रकालागि सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत र केन्द्रिय सदस्य गगन थापा, एशिया क्षेत्रका लागि अर्जुन नरसिंह केसी र अर्जुन प्रसाद जोशी छन् । अमेरिका क्षेत्रकालागि मिनेन्द्र रिजालको नाम तोकिएको छ । अफ्रिका, मध्यपूर्व क्षेत्र र जनसम्पर्क समितिकालागि जनसंपर्क समिति केन्द्रिय विभागका अध्यक्ष गोबिन्द भट्टराई र कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा छन् । त्यस्तै, ओसियाना क्षेत्रका लागि सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई तोकिएको छ ।
‘यो त अली बढी नै भएन र ?’ भन्ने नेपालप्लसको प्रश्नमा आचार्य भन्छन- “मैले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्न नपाउने ? नेपाली कांग्रेस पार्टीले पूर्व पदाधिकारी, नयांँ पदाधिकारी र कोडिनेशन कमिटी बसेर गैर आवाशिय संघ सुधारका लागि, पद्दति र पारदर्शिता बनाउनका लागि मेरो नेतृत्वमा संस्थालाई अघी बढाउन निर्णय गरेको छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई मान्ने एक मात्र पार्टीले गरेको त्यो निर्णयमा मैले गौरव गर्दछु ।”
आचार्यले कांग्रेस पार्टीप्रति गौरव मान्दै भने “कसैले कसैलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरालाई राजनीतिक रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन ।”